Ny tanjon'ny ezaka fampielezana ny haran-koditra dia ny fiheverana ny vatohara amin'ny zanatanà karaoty izay afaka mampitombo ny fanasitranana ny mponina ary manampy amin'ny famerenam-bolo, ny fampielezana ny habaka, ary ny famerenana ny vatohara vaovao. Ankoatra ny fanampiana amin'ny fambolena voajanahary voajanahary, dia manampy koa ny fahasalaman'ny harena voajanahary amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny habakabaka sy ny fahasarotana ho an'ny fikambanana hafa. Noho izany, ny dingana mitrandraka dia dingana tena ilaina amin'ny ezaka atao amin'ny fambolena karaoke, izay itondran'ny vatohara any amin'ny garderie ary haverina any amin'ny toeram-ponenan'ny vatohara.
Ny fampiroboroboana dia mety ho ny ampahany lafo indrindra sy ny asa mavesa-danja amin'ny ezaka famerenana amin'ny famokarana ny haran-dranomasina noho ny ora maro sy ny olona maro mila mampiasa SCUBA sy sambo. Noho izany dia tokony hatao ny fanaovana drafitra tsara mba hampihenana ny fahaverezan'ny haran-kisoa. Eto ambany eto ny fifanakalozan-kevitra lehibe mba hahatonga ny fahombiazan'ny fahombiazana.
Maro ireo fomba amam-panao ampiasaina amin'ny fitaterana sy ny fiarovana ny vatohara any an-kibo ho an'ny vatohara. Ny fisafidianana ny fomba fampiasana farany dia miankina amin'ny karazan-karazan-javamaniry voajanahary, ny karazan'antoka ao amin'ny tranokala famerenana amin'ny laoniny, ary ny tontolo iainana ao amin'ny tranokala (toy ny onjam-pifanampiana). Na izany aza, ho an'ny fandaharan'asa tsirairay, ny fomba fanorenana tsara indrindra dia hahazoana antoka fa ny fiarovana ny vatohara indrindra mandritra ny fotoana maharitra dia mamela ny haran-koditra ho tafiditra ao anaty fonosana vatohara. Ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny dingana tsirairay amin'ny fizotran'ny famolavolana dia resahina etsy ambany.
Rehefa mitondra vatohara avy any amin'ny akanin-jaza mankany amin'ny toeram-pivoahana, ny fampihenana ny fihenjanana amin'ny vatohara dia zava-dehibe indrindra. Ny vatohara dia tokony hoentina mandritra ny fotoana mangatsiaka sy mangatsiaka kokoa amin'ny taona, fa tsy mandritra ny fotoanan'ny fihenjanana amin'ny hafanana na ny fiakaran'ny onjan-dranomasina. Ny fametrahana alokaloka amin'ny haran-dranomasina na fitaterana haran-dranomasina mandritra ny andro mavesatra na mandritra ny maraina na ny hariva dia mety hampihena ny hafanana sy ny alahelo ihany koa. Ny sombin-javatra kely kokoa dia azo afindra amin'ny siny, cooler, na fitoeran-drano feno rano, mba hahazoana antoka fa manana harato na lavaka kely kokoa noho ny haben'ny vatohara ny fitoeran-drano. Sombin-javatra lehibe kokoa (oh:> 30cm ny habeny) dia nafindra tamin'ny fametrahana vatohara tao anaty fitoeram-bokatra lehibe, vata fampangatsiahana misy fonosana miboiboika, na teo amin'ny spaonjy voasaron-dranomasina be toy ny ondana teo am-pototry ny sambo misy lambam-panala na lamba famaohana voasaron-dranomasina. vatohara. Amin'ireo fomba roa ireo, ny ranomasina vaovao dia tokony ampiana tsy tapaka mba hitazomana ny haran-dranomasina hampangatsiaka.
Manana fiheverana lehibe koa ny toetoetran'ny vatohara rehefa mamboly azy ireo. Ny Corals dia tsy tokony hamboly raha toa ka mampiseho toe-javatra tsy voajanahary toy ny fahapotehan'ny teboka vao haingana, ny fivalozana, ny fijanonana / ny fijanonana, na ny parasy. Noho ny vidin'ny fikojakojana ny haran-koditra ao an-tanimbary, tsara kokoa ny manamboatra corals raha vantany vao tafarina lehibe izy ireo ka manana vintana tsara ho velona aorian'ny fiterahana. Ny porofo dia maneho fa ny kolonisa lehibe kokoa dia manana tahiry tsaratsara kokoa taorian'ny fambolena satria afaka manohitra sy mandresy ny ampahatelon'ny fiainana an-jatony, ny fandrobana sy ny sombin-java-colonie kokoa noho ny kelikely kelikely. ref Ny ankamaroan'ny tetikasa amin'izao fotoana izao dia mahita fahombiazana amin'ny alàlan'ny fanamboarana ny vatoharan-java-manelanelana eo amin'ny diam -o 5-15 cm ho an'ny vatoharan-java-manify ary ny diam-pen 4-5 cm ho an'ny karazana masira sy vato.
Ao amin'ny faritra angovo mahery vaika, tsara kokoa ny mampiasa fitaovana hanamafisana ny vatohara any amin'ny vatohara. Amin 'ny ankapobeny dia tokony hisy fifandraisana marobe eo anelanelan'ny haran-dranomasina sy ny fonosana (ho an'ireo sampana sampana) mba hampiroborobo ny tena. Ny fomba fiasa mampiavaka indrindra dia ny 2-ampifandraisina ampahany, fefy sy fantsom-basy, Portland simment, ary ny fantsika amin'ny tambajotra tsy misy idiran'ny filaharam-be,ref Fa ny fomba tsara indrindra amin'ny fitaovana sy ny fitaovana dia miankina amin'ny karazan-javamaniry sy karazam-biby. Ohatra, ny fantsika sy ny fifandraisana amin'ny cable dia fitaovana tsara ho an'ny haran-dranomasina, raha ny simenitra no safidy tsara indrindra ho an'ny vatohara vato.
Maro ny fomba vaovao novolavolaina mba hanamboarana zanatany goavam-be maromaro amin'ny vatohara. Ohatra, ny 'fitombom-pifamoivoizana' dia natao amin'ny vatohara mifamatotra amin'ny zotra miolikolika, mandra-pahatonga ireo vatohara ho vonona hamboly. Mandritra ny fambolena, ny tsipika avoitra dia misaraka amin'ny sambo ary napetraka eo amin'ny fonosana vatosoa, izay toerana azo antoka amin'ny toerana maromaro mba hampiorenana ny rafitra manontolo ary hampiroborobo ny vatohara amin'ny fifehezana ny substrate.
Farany, ny sora-baventy rehetra na ny ampahany amin'ny voaozatra voajanahary dia tokony hosoratana am-pitandremana sy / na hosoratana amin'ny asa fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso amin'ny ho avy. Mba hanaovana izany, tokony halefa ny kôdônina GPS na ny marika tokony hapetraka eo akaikin'ny fambolena hita mazava. Misy karazana marika samihafa izay nampiasaina ary tsy voafetra ho: ny fifandraisana amin'ny cable, ny labozia, ny lamandy, ny plastika voasokitra, ary ny marika metaly mipetaka.
Betsaka ny fikarohana no nanapa-kevitra ny famolavolana drafitra (toy ny density, ny fandrefesana ary ny fandaminana) mba hampitombo ny fivelomany sy ny fitomboan'ny vatohara misamboaravoara. Na izany aza, mbola tsy misy endrika "tsara indrindra". Ohatra, ny vatoharan-java-manify matetika dia miteraka tsiranoka, ary misy fiantraikany tsara eo amin'ny dity avo. Anisan'izany ny taham-pivoarana avo kokoa satria betsaka ny trondro mahazo ny kirihitra ary manome ny ronono amin'ny alàlan'ny vokatra fako. ref Mety hampitombo ny fihanaky ny haran-dranomasina koa ny kirihitr'ala. Na izany aza, ny fandalinana ny fambolena manakaiky akaiky dia nampihena ny tahan'ny fitomboana noho ny fanimbana ny sampana sy ny fihenan'ny voankazo voajanahary, ny aretina ary ny famonoan-tena. ref Noho izany, fitsipika ankapobe vitsivitsy no aroso amin'ny famolavolana endrika izay manatsara ny fahombiazan'ny haran-dranomasina.
Ampiasao ireo tranonkala referansy sy ny habetsaky ny karazam-boankazo any (miankina amin'ny karazana voa namboarina)
Mba hanaparitahana ny loza mety hitranga dia miovaova ny tranokala sy ny teti-pandrefesana mba hisorohana ny fahaverezan'ny coral rehetra ary hamaritana ny fomba fiasa tsara indrindra eo amin'ny toerana misy anao
Rehefa misalasala, mandinika ny drafitra famolavolana anao alohan'ny hanatanterahana ny fanamboarana ny vatohara feno amin'ny alàlan'ny fitarihana ny tetikasa "pilot"
Ny endriny tsotra dia ahitana sombin-tsolosaina miaraka amina karazana génotypes ary mitovy ny halavan'olon-tokana eo anelanelan'ny zanatsika, na ny vondrona kely misy kolontsaina mitovy karazana mba hampiroboroboana ny fusion
Eritrereto ny fiatrehana ny fikajiana na cluster tsirairay, ka hisy fiantraikany eo amin'ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana
Ny kolikoly na ny kolokolok'izy ireo amin'ny famoronana "tsia" dia heverina fa tsy nahomby noho ny herim-piainana ambony
Ny fikarohana vao haingana tany Florida dia nanolotra soso-kevitra ho an'ny korontana 3 isaky ny kilometatra toradroa manatsara ny fitomboan'ny haran-dranomasina sy ny sisa velona ref
Ao amin'ny faritra misy angovo tsy misy angovo, ny fanamboarana sombin-tsakafo kely ho lasa biriky sy lembalemba dia afaka miasa ho an'ny vatoharan-java-manitra izay miaina tsara amin'ny famokarana asexual (ie.e, sobika), toy ny acroporids, fungiids, ary karazana karazana Montipora ary Pocillopora.
Ohatra ny tranokala avo lenta avo lenta. Sary © Elizabeth Goergen, NOVA Southeastern University
Ny genotype ny haran-dranomasina tsy voavoly dia fandinihana mafy ny famerenana ny mponina any an'ala satria mampitombo ny fahafaha-mamokatra sy mamorona olona tsy manam-paharoa. Noho izany, zava-dehibe ny famoahana ireo fifangaroan'ny genotypes raha azo atao. Genotypes folo farafahakeliny isaky ny karazana vatohara no atolotra ho an'ny famoahana isaky ny toerana, miaraka amina zanatany telo farafahakeliny isaky ny genotype raha azo atao. ref
Ankoatr'izany, ny fitrandrahana haran-koditra mankany amin'ny tontolo voajanahary dia tsy tokony hitranga amin'ny elanelana kokoa noho ny 500 km avy amin'ny toerana niavian'ny mpanjanaka fanomezana. Izany dia satria mety ho voafetra ny fifindran'ny otrikaretina eo amin'ireo vahoaka izay misaraka amin'ny lehibe kokoa noho ny 500 km. Ny drafitra tsara dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fahaketrahana ny fahaketrahana, izay misy ny fifandimbiasana eo anelanelan'ny olona izay mifanaraka tanteraka amin'ny fepetra eo an-toerana (ecotypes).